Muuri News Network » Saldhig Al shabaab ay ku leeyihiin Gobalka Sh/Hoose oo diyaarad duqeysay & qasaaraha Weerarkaasi.
Saldhig Al shabaab ay ku leeyihiin Gobalka Sh/Hoose oo diyaarad duqeysay & qasaaraha Weerarkaasi.
Nov 22, 2015 - Comments off
Wararka ka imanaya deegaanka Beled-Amiin ee ka tirsan degmada Wanlaweyn ee gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in xalay saqdii dhexe la duqeeyay saldhig ay ku lahaayeen ciidamada Alshabaab deegaanka Beled-Amiin.
Duqeyntan oo dhacday xalay saqdii dhexe ayaa waxa ay wararku sheegayaan in gantaalo lagu garaacay meel duleedka ka ah deegaanka Beled-Amiin oo ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan ururka Alshabaab.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan siddeed ka mid ah dagaalyahanada Alshabaab ay halkaa ku dhinteen shan kalana ay ku dhaawacmeen.
Deegaano u dhow dhow Beled-Amiin ayaa laga maqlay duqeyntii xalay dhacday iyadoo dadka reer miyiga ay sheegeen in illaa saddex jeer duqeyntu ay dhacday.
Diyaaradaha Drones-ka ee laga leeyahay dalka Maraykanka ayaa hore duqeyn u geysatay saldhigyo ay ku lahaayeen ururka Alshabaab deegaano ka mid ah dalka Soomaaliya, waxaana duqeymahaas lagu diley saraakiil sarsare oo ka tirsan Alshabaab uuna ka mid ahaa hogaamiyihii hore ee Alshabaab.